Holmes ဖိုင်ဘာအသင်းအဖွဲ့ join နှင့်ဖိုင်ဘာဘရော့ဘန်းဖို့အခွင့်အလမ်းများ! | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 30 နိုဝင်ဘာလ, 2013 အားဖြင့် Holmbygden.se
အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်ကြေးဖြစ်ပါသည် 100 kronor per år, tillsammans med en inträdesavgift på 100 SEK (som återbetalas vid eventuellt utträde). Så anmäl dig nu till vår förening för att ha möjlighet till fibernät!
ဘို Lindroos 070-696 53 40 , Stefan Edin 073-070 34 40 , Bengt Sahlén 070-109 58 25